असार ९ देखि दुबई–काठमाण्डौ उडान भर्ने, टिकट मूल्य पनि यति सस्तो ! ? – Enepali Samchar
June 19, 2021 adminLeaveaComment on असार ९ देखि दुबई–काठमाण्डौ उडान भर्ने, टिकट मूल्य पनि यति सस्तो ! ?
e nepalisamchaar काठमाडौं l असार काठमाडौ नेपाल एयरलाइन्सले आगामी जुन २३ देखि दुबई–काठमाण्डौको एकतर्फी उडान सुरु गर्दै छ । नेपाल सरकारले कोरोना महामारीको कारण यूएईमा रोकिएका श्रमिकलाई उद्दार गर्ने उदेश्यले उडान भर्न लागेको हो ।
युएईबाट करार अवधि सकिएका, भिजिट भिसामा आएर अड्किएका र अत्यावश्यक कामले घर फर्किनु पर्ने नेपालीहरूले यी उडानबाट स्वदेश फिर्ता हुन सक्नेछन् । जसको लागि टिकट बुकिङ समेत खुलिसकेको छ । यसअघि नेपाल सरकारले युएई सहित मलेसिया, साउदी उडान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । Sajhasabal बाट साभार
आज पनि देशका विभिन्न जिल्लामा भारि वर्षा हुने यी नदीमा आउन सक्छ बाढी (सूची सहित)
बहिरियो ६० बर्षे नायक भुवन केसिको यस्तो प्रेम लीला !
‘फिल्म फेयर अवार्ड’ मा यी पाँच अभिनेताबिच भिडन्त, तपाईको भोट कसलाई ?
यस्तो छ कोरियाली मजदुरीबाट फर्केका एक सफल व्यावसायीको आत्मकथा